दशैंमा अटोमा अफरैअफर - GBM
दशैंमा अटोमा अफरैअफर
भैरहवा, असोज ।
नयाँ सवारीसाधन किन्ने ग्राहकहरुले यो दशैतिहारको अवसरमा विभिन्न नगद र बम्पर उपहारहरु प्राप्तगर्ने छन् । अटो कम्पनीले ग्राहकहरुलाई आफ्नो कम्पनीको सवारीसाधनमा आकर्षित गर्न विभिन्न अफरहरु दिएका छन् । त्यससँगै एक्चेन्ज र फाइनान्सको सुविधा सहितनगद र बम्पर उपहार योजनाले ग्राहकहरुले नयाँ साधन चढ्ने आकाक्षांलाई पुरा गर्न पाउनेछन् ।
‘होण्डा छ साथ, बम्परमा १५ लाख’
‘होण्डा कम्पनीले होण्डा छ साथ, बम्परमा १५ लाख’ योजना ल्याएको छ । जसमा नेपालमै पहिलो पटक ७ वटै प्रदेशलाई समावेश गरेर हरेक प्रदेशबाट १ जनालाई रु. १ लाख प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसै गरी ग्राहकले बाइकवा स्कुटीको खरिदमा स्क्रयाच कुपनमार्फत एक लाखसम्मको क्यास ब्याक, स्पेयर्स पार्टसमा ७ वर्षको लागि ७ प्रतिशत छुट र ७ वर्षसम्म ९ फ्री सर्भिसिङ्ग कुपन प्राप्त गर्नेछन् । त्योसँगै बम्परमा ग्राहकले रु. १५ लाख समेत जित्न सक्नेछन् । कम्पनीले १ रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट, १ रुपैयाँको इएमआई, १ प्रतिशत इन्ट्रेष्ट रेटको योजना पनि ल्याएको छ । होण्डा कम्पनीका लागि भैरहवाको आधिकारिक विक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.ले सुलभ ब्याजदरमा फाइनान्स, तुरुन्तै एक्सचेञ्ज सुविधा तथा आफ्नै सर्भिस सेन्टरबाट पार्टस र सर्भिसिङको सुविधा समेत पाउने शाखा प्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘दशैको पर्व हिरोत्सवको हर्ष’
हिरो कम्पनीले ‘दशैको पर्व हिरोत्सवको हर्र्ष’ सार्वजनीक गरेको छ । यस योजना अन्र्तगत ग्राहकले हिरो कम्पनीको बाइक र स्कुटी खरिद गर्दा हरेक १५ दिनमा बम्परमा एक लाखसम्म डिस्काउन्ट, ५ हजार पक्का डिस्काउन्ट र हरेक स्क्रयाचमा रु. १ लाखसम्मको क्यासब्याक पाउनेछन् । हिरो कम्पनीको भैरहवाको लागि आधिकारिक विक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिङ्गबाट पनि ग्राहकहरुले यी सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्ने शाखा प्रबन्धक मनोज प्रधानले जानकारी दिए ।
‘यामाहाको स्क्याच, लक्की ड्र र बम्पर योजना’
यामाहा कम्पनीको दशै तिहार योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले यामाहाको स्कुटर बाइकको खरिदमा स्क्रयाच कार्डमा ८ हजारदेखि १ लाखसम्म नगद, साप्ताहिक लक्की ड्र मा १ तोला सुनको तासको पत्ता र बम्परमा ३ तोला सुनको तासको पत्ता पाउनेछन् । त्यसै गरी एक्सचेन्जमा पुरानो मोटरसाइकलको बजार मूल्य भन्दा थप रु. १० हजार मुल्यांकन, शुलभ फाइनान्सको सुविधा रहेको यामाहा कम्पनीको भैरहवाको लागि आधिकारिक विक्रेता किस्मत अटोमोबाइल्स प्रा.लि.का सेल्स म्यानेजर विशाल कुवँरले जानकारी दिए । युवाहरुको आकर्षणको रुपमा रहेको यामाहा कम्पनीको एमटी १५ बीएच–६ मोडलको मोटरसाइकल पनि भैरहवामा उपलब्ध रहेको सेल्स म्यानेजर कुवँरले जानकारी दिए ।­
‘बजाज खुसीको ३ डोज’
बजाज कम्पनीले ‘बजाज खुसीको ३ डोज’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्राहकले बजाज कम्पनीका मोटरसाइकल किन्दा किन्नु अघि रु. १० हजारसम्म, किन्दा खेरी रु. १ लाखसम्म र किनेपछि रु. १० लाख सम्म क्यास ब्याक पाउनेछन् ।
यो कम्पनीको मोटरसाइकलका लागि भैरहवामा आधिकारिक विक्रेता बज अटोमोबाइल्स कम्पनी प्रा.लि. रहेको छ ।
‘सरर सुजुकी कारमा’
सुजुकी कारको भैरहवाका लागि आधिकारीक विक्रेता युनाइटेड साई मोटर्स प्रा.लि.ले ‘सुजुकी पर्वोत्सव २०७८’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो दशै तिहारमा सरर सुजुकी कारमा’ योजना अनुसार कम्पनीले सुजुकी कारको खरिदमा २ लाखसम्म नगद छुट, १ लाख ५० हजारसम्म एक्सचेन्ज बोनस, स्क्रयाच कार्ड डिस्काउन्ट अन्र्तगत ७५ हजारसम्म ग्राहकले छुट पाउनेछन् । त्यस्तै १ वर्षको रोडट्याक्स र १ वर्षको इन्स्योरेन्स सेवा सुविधा दिइएको सञ्चालक संजोग राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
सुजुकीको नगद र बम्पर
सुजुकीको दुईपांग्रे सवारीसाधन मोटरसाइकल र स्कुटी अन्तर्गत ‘दशै आयो उमंग छायो’ ‘क्यास व्याक र बम्पर पायो’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्र्तगत रु. १० हजार सियोर सट क्यास डिस्काउन्ट, १ वर्ष फ्रि रोड ट्याक्स, एक्सचेन्ज र फाइनान्सको सुविधा ग्राहकहरुले पाउने प्रा.लि. ले जनाएको छ । यससंगै बम्परमा १ जनाले मोटरसाइकल पाउने कम्पनीले जनाएको छ । भैरहवाका लागि आधिकारिक विक्रेता सिद्धार्थ मोटर्स प्रा.लि.बाट ग्राहकहरुले सो सुविधा लिन सक्ने अध्यक्ष दिनेशमान अमात्यले बताए ।
फोर्सको गाडीमा नगदसहित उपहार
फोर्स मोटर्सको आधिकारीक विक्रेता सिद्धार्थ विश्वज्योति मल्टिप्रपोज कम्पनी प्रा.लि. ले दशै तिहारको अवसरमा नगद र विभिन्न उपहारहरु योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले क्रुजर जिपको खरिदमा ल्यापटप वामोवाइलका साथै नगद ३ लाख, ट्राभलर बसको खरिदमा स्क्रयाच कार्डबाट ५० हजारदेखि ५ लाख सम्म नगद, ट्याक्स कार्गाे किङ्गको खरिदमा ल्यापटप अथवा मोबाइल उपहार दिइने कम्पनीका अध्यक्ष दिनेश मान अमात्यले जानकारी दिए ।
‘हुण्डाईको नगद छुटसँगै बम्परमा ‘आई ट्वान्टी’
हुण्डाई कम्पनीको गाडीको भैरहवाका लागि आधिकारिक विक्रेता जगत मोटर्स प्रा.लि. बाट ग्राहकहरुले गाडि खरिद गर्दा स्क्रयाच कार्डबाट रु. २० हजारदेखि १ लाखसम्म नगद, १ वर्षको बीमा र सडक करसँगै दशै तिहारको अवसरमा थप सेन्ट्रोमा ८० हजार, क्रेटामा १ लाख १० हजार र अन्य गाडीमा रु. १ लाख नगद छुट पाउनेछन् । त्यससंगै ६ वर्ष फ्रि सर्भिसिङ्ग, ३ वर्षको वारेन्टीसहित बम्परमा आई ट्वान्टी गाडी जित्न सक्ने प्रबन्ध निर्देशक रिश्चल थापाले जानकारी दिए ।
टाटा मोटर्सको छुट तथा एक्सचेन्जमा बोनस
टाटा मोटर्सको गाडीको लागि आधिकारिक विक्रेता बुद्धम अटोमार्टले गाडी खरिदमा दुई लाखसम्मको छुट प्रदान गर्ने भएको छ । दशै तिहारको अवसरमा टाटा मोटर्सको गाडी खरिद गर्दा फ्रि एक्सेसरिज, रोड ट्याक्स, एक्सचेन्ज बोनस, ३ वर्षका लागि वारेन्टी र फ्रि सर्भिस, फ्रि ओनरसिप ट्रान्सफर जस्ता सुविधा रहेको बुद्धा अटोमार्टका प्रबन्ध निर्देशक अभिनव मयुर कसौधनले बताए ।
← ईपीएल क्रिकेट : भैरहवा क्वालिफायरमा, काठमाण्डौ बाहिरियो
पाकिस्तानमा भूकम्प, २० को मृत्यु, तीन सय भन्दा बढी घाइते →
बालिकालाई बलात्कार पश्चात हत्या गर्ने अभियुक्त पक्राउ
२०७४ फाल्गुन २३ gautam buddha sandesh	0
जेष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धि अन्तरक्रिया